Exoplanet kuurgalay Iyadoo In geeddi-socodka horumarinta? - Rule News
Exoplanet kuurgalay Iyadoo In geeddi-socodka horumarinta?
exoplanets An in habka horumarka? NASA ee Hubble Area Tlescope ayaa laga yaabaa inuu dhawaan laga helay wax kaliya sida a– meel bannaan oo aan caadi ahayn in disk weyn protoplanetary gaaska iyo boodh jeestay xiddigtii cilin cas TW Hydrae.
“TW Hydrae waxa uu ku yaalaa ku saabsan 176 sano oo iftiin ah iska in koox Haydradii, Aacii abeesadii badda. The sharaxaad xannibo kaliya, Aacii weli hore u gelin, waayo, Aacii farqiga in disc protoplanetary in koobay xiddigtii waa in ay tahay natiijada meeraha a sii kordhaya oo la gravitationally ururinta kor u badan oo wax ku in haddii kale waxaa jiri lahaa. Dabcan meeraha noocan oo kale ah ayaa weli la arkay, oo waxaa jira fursado kale.
Wax in la ogaado, masaafada u dhaxaysa farqiga iyo xiddiga waalidka waa halkii weyn, 7.5 billion miles. Haddii meeraha la soo jeediyey wuxuu ku dhex jiray nidaamka qoraxda in ay ku riday lahaa at ah oo ku saabsan laba jeer meel fog ka soo Sun in Pluto waa fog ilaa xad ah.
Meesha of meeraha la soo jeediyey ay u muuqataa wax qariib ah in kastoo, kuwii duurka, babac aragtiyaha ugu caansan oo ku saabsan sida meerayaasha dhiso. The aragtida ugu caansan ayaa sheegay in muddo ka badan tobanaan malaayiin sano in maaddadu ay of disc a protoplanetary si tartiib ah laysku ciidda xoogga, dhagaxyada, iyo gaaska, of disc galay meeraha hoggamiye a. TW Hydrae iyo meeraha cusub ee la soo jeediyey don,Äôt dhigma la aragtida, inkastoo, nidaamka xiddiga yahay oo kaliya 8 milyan oo sano jir ah. Waxaa ma waqti ku filan meeraha ah si ay u koraan iyada oo raasamaal tartiib ah haraaga yar. Dhab ahaan, meeraha a at 7.5 bilyan oo miles ka xiddig qaadan lahaa in ka badan 200 jeer ka dheer si ay u sameeyaan ka badan Jupiter sameeyey ay meel fog ka Sun ah sababta oo ah xawaaraha orbital badan gaabis ah iyo Nusqaan ee wax ku disk ah”. Source: Planetsave
Markii aan hore arkay dhismeedka meesha bannaan ee, waxaa si fudud u dabamariyay sida in, waa in aad caddayn. Runta waxa ay tahay in aan aragto meel ee Milanello kasta idiin ka warrami in ay sifo dhismaha ah halkii artifact muhiim ah ama sifo ah sida ciidda fidiyana light.
Hubble yaabaa ogaaday Planet A Taasi jirin habboonayd
basaasyo Hubble meeraha yaabo dhashay xaafadda colaadeed
NASA EE Evidence Hubble soo saaro of fog Planet U samaynta From Its Star .
Planet The Taasi jirin habboonayd
← Diyaarad shil ku Alaska – 10 lagu dilay San Francisco Diyaarad shil: →